Ngokuvamile, i- nokwenza intela inzuzo nezinsiza zezimali Holdings ezinkulu uhlelo athuthukile, okuyinto ebonisa inhlangano ukunyakazisa zezimali kanye lezimpahla ageleza ngendlela yokuthi ziyoncibilika izakhiwo umlamuli nabantu exhunyiwe (iziphathimandla abaholi noma phakathi abasunguli izinkampani eziningana inkampani efanayo ubambe ).
isipiliyoni Umhlaba emkhakheni intela ebonisa ukuthi elilungile intela umthwalo phezu komunye oyedwa kufanele kube kufika ku-40% imali engenayo.
Umthwalo yentela amabhizinisi Russian kohlelo ezivamile intela ngezinye izikhathi kufika ku-70% wemali engenayo isiyonke. Lokhu iphesenti eliphezulu kungenxa ezingeni intengo imali yentela etholwe lokukhokha komunye oyedwa, futhi kuncike base kwentela kanye intela, okuyinto ezikhokhwa isabelomali manje.
Ezingeni umthwalo ibhizinisi intela inhlangano ibonisa share wakhiphisa ngesimo izintela yemali Imininingwane. Le nkomba esibaliwe ratio ukukhokha intela Imininingwane yenqwaba ingqikithi yezimpahla, amasevisi nemisebenzi. Izindlela ukubala eziningi kule ezincwadini zesayensi. Ahluke inani intela engaqondile futhi acabangele inani yokuthengisa amavolumu.
Ukubonisa ibhizinisi ukusebenza ukhiqiza umthwalo wentela, ukubala ogxile ikhumbula izinkomba ezifana: intela nenkhulumombiko, le esihlanganisiwe yezenhlalakahle intela, kanye, yebo, iminikelo umshwalense ayimpoqo yezenhlalakahle ngokumelene izingozi zezimboni. Amazinga wentela zithathwa ngokuhambisana nomthetho ofanele. Kulokhu, eziyinhloko ukuze kubhekwe nomthelela ku umthwalo wentela:
- inqubomgomo ezimali inkampani;
- amakhefu nezinye izintandokazi;
- mali, ukutshalwa kwezimali kanye nenqubomgomo yentela isimo;
- ukutholakala izabelo mali, deferrals futhi isitolimende izinkokhelo, kanye credit intela utshalomali ;
- ibhizinisi yokuhlala e engasogwini noma a khulula indawo kwezomnotho (eRussia).
intela umthwalo Okugcwele ibhizinisi uvezwa njengoMahluleli isilinganiso aggregate enqwabelene futhi ikhokhelwe intela kuya isukela ukuthengiswa kwezimpahla phezu esikhathini esinikeziwe, kuhlanganise imali nezinye engenayo.
NN = N / (WA GNI +) * 100%, lapho
NN - inkomba yokuthi umthwalo wentela;
N - nenani izintela enqwabelene futhi ikhokhwe;
WA - imali etholakale ngokudayiswa;
GNI - izindleko ze-non-yokusebenza.
Umthwalo wentela inhlangano ibhizinisi okwaxoxwa nawo usebenzisa izibonisi ambalwa, usebenzisa indlela Coefficient. Ngokungafani nabanye abantu, le ndlela kusivumela ukulinganisa umthwalo wentela ngisho notshwala ezinjalo izikhungo ngamunye wezimali, njengoba engenayo, izimali, izintela ngokungaqondile, inzuzo etholakale kuncike, inkokhelo kanye izinzuzo.
Tax umthwalo isici ratio usayizi ukukhokha intela ukuze ukugeleza wezimali e owaqalwa. Amanani kuleli zinga Inkomba zero komunye. Kulokhu, ayikho intela isezingeni zero, futhi zonke angenayo kwemali kuhoxiswa ifomu lentela ngobunye kwesabelomali.
Kunenye elithile umthwalo wentela, ebalwa njengoba isilinganiso emva kwentela kwemali kwasekuqaleni. Lesi sibalo ngokuthi Coefficient okukhiphayo.
Umthwalo wentela kungase kushintshwe ngosizo lokuphatha isimo. Ngokwesibonelo, nokwehlisa umthwalo intela ku inzuzo etholakale, isimo kudala izimo ezivuna ukuthuthukiswa ngokushesha yalemitimba.
Ezingeni intela umthwalo isimo njengoba ibalwa ngesisekelo ethile ibhizinisi. Nokho, kulesi simo sikhuluma isabelomali ngendlela intela nemali-non-intela, futhi umthamo wokuthengisa imelelwa ivolumu kwezibalo ukuhweba.
Yiziphi izintela ukukhokha izakhamuzi Russian Federation. Kungakanani izakhamuzi intela ukukhokha
Ingxenye kwesokudla abakhokhi bentela ukuze imoto esimemezelweni
Kanjani futhi obani ke ibalwa impahla sentela
Indlela hlola amanani ngenxa intela, ngaphandle kokushiya ekhaya lakho?
Ilungiselela ama-raspberry ebusika: esifushane mayelana into esemqoka
Ukukhetha ophahleni imisiwe. Yikuphi okungcono: kusukela Indwangu noma PVC?
"Clopidogrel": analogue, ukusetshenziswa, manual, intengo
Isikhungo sebhizinisi "Tver": incazelo, ikheli, izithombe
Yiziphi osayizi zokugqoka izinja futhi kanjani uzithole
Laptop ebilayo: yini okufanele uyenze?
Iziphethu kusuka ibha. okugeza project 6x4 amapulangwe